Dhageyso:Soomaaliya Masoo Ceshaneysaa Samaheedii Sanado ka hor suul daarmay(Faallo) | Radio Danan (DBN) 94 FM
Home / QORMOOYIN / Dhageyso:Soomaaliya Masoo Ceshaneysaa Samaheedii Sanado ka hor suul daarmay(Faallo)
Dhageyso:Soomaaliya Masoo Ceshaneysaa Samaheedii Sanado ka hor suul daarmay(Faallo)
Posted by: DBN in QORMOOYIN, WARARKA, WARARKA CAALAMKA, WAREYSIYO February 25, 2017	Comments Off on Dhageyso:Soomaaliya Masoo Ceshaneysaa Samaheedii Sanado ka hor suul daarmay(Faallo)
Dhibaatada iyo kacaakufka uu marayo dalka soomaaliya waxaa uu yimid ka dib markii Aan anagu isku kadeedanay.
Kolba koox ayaa kaalin kaqaadanaysa ka qaadida kadeedka hareeyay hormarka Soomaaliya dunidana ka dib dhigay.
Kooxda dadaalka waday arintooda marna manoqonin mid kobciya kana qaada dalka dadkiisa kadeedka lakacaa kufaya.
Koox soomaali ah ayaa soo kuus kuustay mid la is lahaa waa kan kaalin ka qaadan kara kobaca kala fur furida ka deedka ka taagan soomaaliya.
Xunsul duubkaas marna ma dib dhicin hadba dhan ayaa loo rog rogayay qaabkii soomaaliya sara loogu qaadi lahaa.
Geediga kolba Gashiin ayuu galayay sida Eel dored iyo carta halkaas ayaa ahaa jidka sanado safarka sal dhigiisa uu ahaa waxaan ula jeedaa Dr Cabdi Qaasim Salaad Xasan,Cabdulaahi Yuusuf Axmed iyo Shariif sheikh axmed oo intuba lagu soo doortay goobaha Aan ka soo hadlay.
Burburkii ka dhacay Soomaaliya waxaa uu dhaawacay sumcadii soomaaliya dunida ay ku lahayd. Waana mida keentay in talada dalka dad Aan diin iyo dalba aanan wadaagin kolba ay jahwareeriyaan siyaasada soomaaliya.
Jaaliyal walba jid ayay inoo jeexeen siloogu jalbado ama loojaclaado jidka ay inoo tusiyeen in ay noo xaar xaareen laakiin nooma xaar xaarine way naxanuujiyeen jaaliyaal.
Jah wareer iyo juk juk uyuu noqday jidkoodii jaaliyaashii jidka noo jeexay misana qaarkood waaba soomaali kuwas.
Jah wareeriyaasha Ajanabiga ah waaba ka xagjiraan Jaaliyaasha soomaalida ah.
Safar dheer dabadeed Soomaaliya Samaheedii masafarka ayuu ku saqiiray mise waa uu suuxay waa su,aal jawaab ubaahan.
Ukala sarifid kala soocid sanado badan soomaaliya surankii laga sugaayay ayay sikano ujirsatay
Sanadii 2012 waxaa Muqdisho lagu doortay Xasan Sheekh maxamuud oo bedalay Shariif sheikh axmed si sharaf leh ayuu uwareejiyay xilka shariif markii laga guuleystay.
Waa markii ugu horeysay burburkii ka dib qaabkan soomaaliya ay wax ugu dhacaan markii loo eego marxalada soomaaliya ay mareyso.
Afar sano ka dib 8 dii bishaan fabaraayo sanada 2017 waxaa la doortay Maxamed Cabdulaahi Maxamed farmaajo waxaana uu ka guuleystay xasan sheikh maxamuud oo xilkaas afarsano soo hayay.
Inta ku abtirsata qoomiyada soomaalida ayaana kalgaceel loogu muujiyay guusha farmaajo.
Xasan sheikh maxamuud si wanaag uu ku jiro ayuu xilka uu ku wareejiyay waa marxaladii labaad oo loo riyaaqay 8 sanadood gudahood 3 madaxweyne si lab furnaan ah xilka iskuuga wareejiyay soomaaliya gudaheeda.
Samaha soomaaliya masaqiirin ee wuusuuxsanaa hada wuu soo sarakacya sikano ayaa ka dhiman sarakaciisa ee ha sugi waayin Silac iyo saxariir safar dheer ka dib soomaaliya hada waxay umuuqataa in ay soo ceshaneyso samaheedii sanado kahor suuldaarmay hadii sikale wax noqonin.
Soomaaliya hanoolaato allaa weyn ininkii aaminaa awoodleh.
Previous: Deg Deg:Kooxo Hubeysan oo Caawa Nabadoon Dhaawacay
Next: Warqado laga Naxay oo Caawa lagu daadiyay Xaafad ka tirsan D/Hodan